2 Tantara 30 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 30:1-27
30 Ary nandefa iraka nankany amin’ny Israely rehetra+ sy ny Joda i Hezekia, sady nanoratra taratasy ho an’ny fokon’i Efraima+ sy Manase,+ ka nanasa azy ireo hankany an-tranon’i Jehovah+ any Jerosalema, mba hankalaza ny Paska+ ho an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely. 2 Ary nanapa-kevitra ny mpanjaka sy ny andrianany+ ary ny fiangonana+ manontolo tao Jerosalema fa amin’ny volana faharoa vao hankalazaina ny Paska.+ 3 Tsy afaka nankalaza izany mantsy izy ireo tamin’izay,+ satria tsy ampy ny mpisorona+ nanamasina ny tenany, sady mbola tsy tafavory tany Jerosalema rahateo koa ny vahoaka. 4 Ary hitan’ny mpanjaka sy ny fiangonana manontolo fa tsara ilay hevitra.+ 5 Koa nanapa-kevitra izy ireo ny hanao antso avo+ manerana an’i Israely, hatrany Beri-sheba+ ka hatrany Dana,+ hanasana azy ireo hankany Jerosalema, mba hankalaza ny Paska ho an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Efa ela mantsy izy ireo no tsy nankalaza izany tambabe,+ ka tsy nanaraka izay voasoratra.+ 6 Koa araka ny didin’ny mpanjaka, dia lasa nitety ny Israely sy ny Joda ireo mpihazakazaka+ nitondra ny taratasy avy tamin’ny mpanjaka sy ny andrianany,+ ka niteny hoe: “Ry taranak’Israely, miverena+ amin’i Jehovah Andriamanitr’i+ Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany koa amin’ireo sisa tavela aminareo izay tsy azon’ny+ tanan’ny mpanjakan’i Asyria.+ 7 Koa aza manahaka ny razanareo+ sy ny rahalahinareo, izay nivadika tamin’i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka nataon’Andriamanitra igagan’ny olona,+ toy izao hitanareo izao. 8 Ary aza manamafy hatoka+ tahaka ny razanareo. Maneke kosa an’i Jehovah,+ ka mankanesa any amin’ny toerany masina,+ izay efa nohamasininy+ mba ho masina mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary manompoa+ an’i Jehovah Andriamanitrareo, mba tsy hirehitra aminareo intsony ny fahatezerany.+ 9 Raha miverina+ amin’i Jehovah mantsy ianareo, dia hahazo famindram-po+ amin’ireo mpamabo azy ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka havela hiverina eto amin’ity tany ity.+ Fa tsara fanahy+ sy mamindra fo+ i Jehovah Andriamanitrareo, ka tsy ho izy indray no hihodina tsy hijery anareo, raha miverina aminy ianareo.”+ 10 Koa lasa ireo mpihazakazaka,+ ka nitety tanàna nanerana ny tanin’i Efraima+ sy Manase hatrany Zebolona. Naneso sy nanaraby azy ireo foana anefa ny olona.+ 11 Nisy nanetry tena+ ihany kosa ny olona sasany+ tamin’ny fokon’i Asera sy Manase ary Zebolona, ka tonga tany Jerosalema. 12 Nomba ny Joda koa ny tanan’Andriamanitra, ka nahatonga azy ireo hiray fo+ hanatanteraka ny didin’ny+ mpanjaka sy ny andriana, momba ny fanompoana an’i Jehovah.+ 13 Dia nivory tany Jerosalema+ izy ireo mba hankalaza ny fetin’ny+ mofo tsy misy lalivay, tamin’ny volana faharoa.+ Maro be izy ireo, eny, fiangonana lehibe tokoa. 14 Ary nanaisotra an’ireo alitara+ tany Jerosalema izy ireo. Nesoriny koa ny alitara+ rehetra fandoroana emboka manitra, ka nariany tany amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Kidrona.+ 15 Avy eo dia novonoin’izy ireo ny zanak’ondrin’ny Paska,+ tamin’ny fahefatra ambin’ny folon’ny volana faharoa. Ary menatra ny mpisorona sy ny Levita, ka nanamasina+ ny tenany, ary nitondra fanatitra dorana tao an-tranon’i Jehovah. 16 Dia nijoro+ teo amin’ny toerana tokony hisy azy izy ireo, araka ny lalàn’i Mosesy lehilahin’Andriamanitra. Ary nafafin’ny mpisorona+ ny ra noraisiny avy teny an-tanan’ny Levita. 17 Ary maro tamin’ny olona anisan’ny fiangonana no tsy nanamasina ny tenany. Koa ny Levita+ no niandraikitra ny famonoana ny zanak’ondrin’ny Paska+ ho an’izay rehetra tsy nadio, mba hanamasinana azy ireo ho an’i Jehovah. 18 Fa be dia be ny olona tsy nidio,+ ary maro tamin’izy ireo no avy tamin’ny fokon’i Efraima+ sy Manase+ sy Isakara ary Zebolona.+ Ary nihinana ny Paska ihany izy ireo, na dia nifanohitra tamin’izay voasoratra aza izany.+ Nivavaka ho azy ireo anefa i Hezekia+ hoe: “Enga anie i Jehovah, izay tsara fanahy,+ hamindra fo 19 amin’izay rehetra nanomana ny fony+ hitady an’ilay tena Andriamanitra, dia i Jehovah Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka izay takina amin’ny fankalazana masina aza izy ireo!”+ 20 Dia nihaino an’i Hezekia i Jehovah, ka namela ny fahadisoan’ny vahoaka.+ 21 Ary ny zanak’Israely izay tany Jerosalema, dia nankalaza tamim-pifaliana+ lehibe ny fetin’ny+ mofo tsy misy lalivay, nandritra ny fito andro. Ary nidera an’i Jehovah isan’andro tamin’ny zavamaneno mafy feo ny Levita+ sy ny mpisorona,+ eny, nidera an’i Jehovah izy ireo.+ 22 Dia nampaherezin’i+ Hezekia ny Levita rehetra izay nampiasa tsara ny talentany teo amin’ny fanompoana an’i Jehovah.+ Koa nandritra ny fito andro,+ dia nihinana ny sakafo tao amin’ilay fety izy ireo, sady nanao sorona iombonana+ ary nibaboka+ tamin’i Jehovah Andriamanitry ny razany. 23 Ary nanapa-kevitra+ ny fiangonana manontolo fa hankalaza ilay fety mandritra ny fito andro fanampiny.+ Koa nankalaza izany tamim-pifaliana nandritra ny fito andro izy ireo. 24 Dia nanome+ ombilahy arivo sy ondry fito arivo ho an’ny fiangonana i Hezekia mpanjakan’ny Joda, ary ny andriana+ kosa nanome ombilahy arivo sy ondry iray alina. Ary be dia be ny mpisorona+ nanamasina ny tenany. 25 Dia nifaly+ ny fiangonan’ny Joda+ manontolo, sy ny mpisorona, sy ny Levita,+ sy ny fiangonana manontolo avy tany amin’ny Israely,+ ary ny mpivahiny+ izay avy any amin’ny tanin’ny Israely+ sy izay nonina tany Joda. 26 Ary nisy fifaliam-be tany Jerosalema, satria mbola tsy nisy toy izany tany,+ hatramin’ny andron’i Solomona+ zanak’i Davida mpanjakan’ny Israely. 27 Farany, dia nitsangana ireo Levita mpisorona ka nitso-drano+ ny vahoaka. Dia nohenoina izy ireo, ary tonga tany amin’ny fonenana masin’Andriamanitra, tany an-danitra,+ ny vavaka nataon’izy ireo.